स्थानिय निर्वाचन « Clickmandu
महत्वाकांक्षी योजना बोकेर अघि बढ्दै ऐतिहासिक विराटनगर महानगर
काठमाण्डौ । देशभरका स्थानीय तहमा के कसरी काम भइराखेको छ ? के गर्दैछन् जनप्रतिनिधिहरु ? नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को शुरुवातबाट क्लिकमाण्डुले नयाँ स्तम्भ स्थानीय तह शुरु गरेको छ ।
पोखरा–लेखनाथ महानगरको के छ हालखबर ?
बिराटनगरको कार्यक्रमः फोहोर फोल्नेको सुचना दिनोस्, नगद पुरस्कार लिनोस्
काठमाडौं । फोहोर ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले अनौठो योजना सार्बजनिक गरेको छ । महानगरले जथाभाबी फोहोर फाल्नेको सुचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न थालेको हो । फोहोर ब्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै
नेपाली काँग्रेसले पहिलो चरणको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु खटाउने
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिका प्रतिनिधिहरु पठाउने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा
निर्वाचनको समयमा कार्यालय प्रमुखहरुले बिदा बस्न नपाउने
बैतडी । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आइतबार उम्मेदवारी दर्ता भएसँगै बैतडीमा चुनावी गतिविधिले तीव्रता पाएको छ । सरकारी कार्यालयले पनि चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्षरूपले सम्पन्न गर्न पहल
नुवाकोट । आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन नुवाकोटमा सशस्त्र प्रहरी बल पनि परिचालन गरिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमनजंग थापाको नेतृत्वको ३५
नुवाकोटमा दुुईलाख आठ हजार मतदाता, २२ हजार मतदाता थपिए
नुवाकोट । मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि नुवाकोटमा स्थानीयतहको निर्वाचनको भन्दा २२ हजार मतदाता थपिएका छन् । वैशाख ३१ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा एकलाख ८५ हजार ७८२
काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझायो
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको छ । संविधानअनुसार संघीय संसद्का लागि ११० र प्रदेश सभाका लागि २२० को
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने कार्य शुरु भएको छ । कान्तिपथस्थित निर्वाचन
नेपाल प्रहरीलार्इ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- निर्वाचनको सुरक्षा तयारीमा लाग्नुहोस्
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंसिर १० र २१ गतेका लागि तय भएको संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षा तयारीमा जुट्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । बैसठ्ठीऔँ प्रहरी दिवसका
धनगढीका लागि उडेको बुध्द एयरको विमान काठमाडौंमा आकस्मिक अतवरण
काठमाडौं । काठमाडौंबाट धनगढीका लागि उडान गरेको बुध्द एयरको विमान काठमाडौं विमानस्थलमा आकस्मिक अतवरण गरिएको